Dayactirkii laamiga u dhaxeeya Galkacyo & Bacaadweyn oo la dhammaystiray iyo madax ka tirsan dawladda oo ka qayb-galay xafladdii furitaanka. – Radio Daljir
Dayactirkii laamiga u dhaxeeya Galkacyo & Bacaadweyn oo la dhammaystiray iyo madax ka tirsan dawladda oo ka qayb-galay xafladdii furitaanka.
Galkacyo, July 27 ? Munaasabad lagu daah-furayey dayactir cusub ee lagu sameeyey qayb ka mid ah waddada laamiga ah ee isku xirta inta badan gobollada Puntland ayaa maanta lagu qabtay kadinka hore ee laga soo galo magaalada Galkacyo gaar ahaan marka laga yimaada dhinaca gobollada kale ee Puntland halkaasi oo ah goobta uu ku joogo dayactirka laamigu.
Xafladda furitaanka oo ay ka soo qayb-galeen madax iskugu jirtay dawladda dhexe iyo kuwo heer gobol ah ayaa lagu muujinayey dhammaystirka mashruuc lagu dayactirayey waddada laamiga ah gaar ahaanna inta u dhexaysa Galkacyo iyo tuulada Bacaadweyn taasoo muddooyinkii ugu dambeeyey dib-u-habayn lagu samaynayey.
Qaybta ka mid ah waddada laamiga ah ee maanta dayactirkeeda la soo gaba-gabeeyey ayaa gaarsiisan qiyaastii illaa 45-KM, waxaana dib-u-habaynteeda muddo ku hawllanayd hay?adda daryeelka waddooyinka Puntland ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaanno NESHA.
Dhismaha waddadaasi ayaa waxaa fulinaysay shirkad maxalli ah oo xagga dhismaha ah ka shaqaysa taasoo lagu magacaabo BACA, waxaana ay sheegtay dib-u-habaynta waddadaasi in uu ku baxay adduun dhan 388,000 oo dollar taasoo ay bixiyeen dawladda iyo dadka shacabka ahiba.
Wasiirka wasaradda hawlaha guud iyo guryanta ee dawladda Puntland Daahir Xaaji Khaliif oo hadal kooban ka jeediyey munaasabaddii lagu daah-furayey dayactirka waddadaasi lagu sameeyey ayaa sheegay in ay farax-weyn u tahay ka qayb-gallidda munaasabaddaani, isagoo sheegay dawlada ahaan in ay ka go?an tahay wax-ka-qabashada waddada laamiga ah oo lagu tilmaamo in ay hawlbawle u tahay isku xirka gobollada Puntland ee dhan walba.
Dhinaca kale agaasimaha hay?adda jidadka Puntland Eng. Xassan Cismaan Cali oo isna ka hadlay madashaasi ayaa si kooban u iftiimiyey dadaalka loo galay dib-u-habaynta burburka xooggan ee saameeyey jidkaasi laamiga ah, waxaana uu dadweynaha ka codsaday in gacan lagu siiyo tallaabooyinka wax-qabad ee ku aaddan dayactirka laamiga.
Jidka laamiga ah ee isku xira inta badan gobollada Puntland ayaa muddooyinkii dambe waxa soo wajahay burbur iyo jajab xooggan oo intiisa badan soo gaaray inta u dhaxaysa gobollada Mudug iyo Nugaal, waxaana haatan dhawr meelood ka socda qorshe dib loogu hagaajinayo laamiga taasoo ay ku hawlan tahay hay?adda waddooyinka Puntland ee NESHA.